Cabdi Qeybdiid oo noqday Xildhibaankii labaad ee loo doortay Aqalka sare – STAR FM SOMALIA
Cabdi Qeybdiid oo noqday Xildhibaankii labaad ee loo doortay Aqalka sare
Jen Cabdi Xasan Cawaale oo loo yaqaano Cabdi Qeybdiid ayaa noqday Xildhibaankii labaad ee loo doorta Aqalka sare, iyadoo wali magaalada Cadaado ka socota doorashada Musharaxiinta Aqalka sare ee Maamulka Galmudug.
Cabdi Qeybdiid ayaa ka guuleystay Musharaxa Maxamed Xuseen Tahliil oo kula tartamayay Kursiga Beesha Sacad ee Aqalka sare.
Abshir Axmed oo loo yaqaano Abshir Bukhaari ayaa noqday xildhibaankii u horeeyay ee loo doorta Aqalka sare, waxaana uu ka guuleystay Labo Musharax oo kale
Doorashada ka socota Cadaado ayaa ah mid aad u xiiso badan oo si aad ah isha loogu haayo, waxaana Maamulka Galmudug uu noqonayaa maamulkii u horeeyay ee soo gudbiya doorashada Xildhibaanada Aqalka sare.
Sidoo kale waxaa ku xiga doorashada kursiga Beesha Murusade oo ay ku tartamayaan Cabdi Axmed Dhuxulow Dhegdheer iyo Luul Maxamed Sheekh Cusmaan.
Guddoomiyaha Buurhakaba oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay Degmadaasi
Wasiiru dowlaha Maaliyadda iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo gaaray Jowhar